NENWE AKWANYERELA DIG NWOBODO UGWU – hoo!haa!!
Abuja: Otu Nenwe Integrity Foundation (NIF) nọrọ ụnyaahụ, abalị iri abụọ n’abụọ nke ọnwa Juun nke afọ a n’ụlọ ezumezu ndị agha a na-akpọ Army Headquarters officer’s Command Mess 1, Abuja were kwanyere Osote Onyeisi ndị Uwe ojii na Naịjiria bụ DIG Godwin Nwobodo ugwu maka mbuli n’ọkwa ya.
Ndị ọzọ otu NIF bụ otu na-ahụ maka iweta mmepe nakwa ọganihu na Nenwe kwanyekwara ugwu gụnyere Hon(Oriaku) Maria Aniobi bụ onye akpọlitere n’ọkwa dịka Kọmishọna na-anọchite anya Enugwu Steeti n’ụlọ ọrụ Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission tinyekwara Ọkaikpe Nnenna Alukwu bụ onye a kpọlitere n’ọkwa dịka Ọkaikpe n’Enugwu Steeti.
N’okwu mmalite ya, onyeisi oche ya bụ mmemme bụ Ọkammụta M.Ọ. Madụagwụ bọtara otu NIF maka ịkwanyere ụmụ afọ Nenwe madụ atọ ndị a mere ka aha obodo ha bụ Nenwe na-ada ụda ugwu pụrụ iche maka na “a bọta onye akịdị, ụbọchị ọzọ ọ gwọta akpaka(ụgba) “. Ya bụ na-etoo dike na nke o mere, o mekwara ọzọ.
O kelekwara ha maka Ụlọ ọrụ ndị Uwe ojii ha rụrụ na Nenwe na nso a.
N’okwu ya, Dọkịnta Cyril Oleh bụ Onyeisi otu NIF kọwara Nenwe dịka obodo Chineke gọziri agọzi ma rịọkwaa ka ndị obodo ahụ nile kwado otu ha na mbọ ha na-agba ime ka Nenwe ghọọ Ala Bekee.
Ihe pụtara ìhè emegasịrị ụbọchị ahụ gụnyere Inye onyinye nkwanyeugwu, Ikwirikwo bụ egwu omenala eji mara Nenwe, ozi ekele tinyekwara ịkụ ngaji n’eze.
Ụfọdụ ndị Nenwe nwere agba bịara ya bụ mmemme gụnyere AVM Chris Chukwu(Laworo ezumike), Air Commodore Ben Ugwueke(Laworo ezumike), wdg.
Nenwe bụ obodo dị n’okpuru ọchịchị Aninri nke Enugwu Steeti ma bụrụkwa obodo a mara aha ya dịka obodo nweworo onye bụ Sinetọ n’oge ọchịchị Zik ha bụ Sinetọ M. B. Chukwubike tinyekwara Group Captain Joe Orji (Laworo ezumike) bụ Gọvanọ chịburu Gombe Steeti n’oge ọchịchị ndị agha.
Previous Post: UNTH;ARỤ NA MPỤ AKARỊA
Next Post: “RUGA” AMA FULANI:AWỤSA ABATA ỌKA